Etu ị ga - esi mee ka Storelọ Ahịa Play rụọ ọrụ na Ọkụ anyị mgbe mmelite ahụ | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Otu esi eme ka Storelọ Ahịa Play rụọ ọrụ na Fire anyị mgbe emesịrị
Joaquin Garcia | | Amazon unu si n'ihe unu, software
Dị ka ọtụtụ n'ime gị maara, mbadamba Amazon emelitere na nsụgharị ọhụrụ nke na-agụnye ụda olu Alexa. Nke a abụwo nnukwu mgbanwe maka ndị ọrụ ya mana ọbụlagodi maka ndị nwere Storelọ Ahịa Play awụnyere na ngwaọrụ a.
Ọhụrụ melite na ngwaọrụ emeela ka ụfọdụ ngwa kwụsị ọrụ ka ha kwesiri, karịsịa ndị arụnyere na aka. Karịsịa, Playlọ Ahịa Google Play akwụsịla ịrụ ọrụ. Ọrụ dị oke mkpa maka ụfọdụ ndị ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ emeela mkpesa banyere ọnọdụ ahụ. Gbanye Nzukọ XDA achọtala azịza. Ọ bụghị ezigbo ihe ngwọta ọ bụ azịza nke na-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe mmelite ọzọ ọ ga-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu.
Na incorporation nke Alexa na-enye nsogbu na Play Store nke Fire mbadamba
Ihe ngwọta ahụ bụ ịwụnye nsụgharị ọhụrụ nke ngwa abụọ Google nwere na ngwugwu GAPPS, a na-akpọ ngwa ndị a Ihe Njikwa Akaụntụ Google na Google Ọrụ Framework. Ngwa ndị a, mgbe emelitere, na-eme ka Storelọ Ahịa Play rụọ ọrụ ọzọ.
para wụnye Google Play na Kindle Fire, mbụ anyị nwere ibudata nchịkọta ebe a y ebe a. Ozugbo anyị nwere faịlụ apk ahụ, anyị na-enyefe ya na ngwaọrụ ahụ. Tupu ịwụnye, anyị na-aga Ntọala ma gaa na menu Nche nke na-enye anyị ohere ịwụnye faịlụ na mpụga Amazon Appstore. Mgbe ịmechara ya, anyị na-etinye ngwa ndị anyị budatara na mgbe nwụnye anyị Malitegharịa ekwentị.
Ozugbo anyị malitegharịrị usoro ahụ, ọkụ anyị ga-enwe Storelọ Ahịa Play na-arụ ọrụ ọzọ anyị nwere ike ibudata ngwa ọ bụla site na ụlọ ahịa yana ọdịnaya ndị ọzọ. Ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ karịa Amazon Appstore. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị nwere ike Ekwadoro m ka ị budata GAPPS niile na Google ma melite ngwa dị na Fire anyị, yabụ anyị ga - ezere inwe nnukwu nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » software » Otu esi eme ka Storelọ Ahịa Play rụọ ọrụ na Fire anyị mgbe emesịrị
Daalụ maka Ama ahụ, agbasoro m usoro ahụ ma ọ na-arụ ọrụ
Griselle Rojas dijo
Enwetara m google play na ọkụ m7 ma ugbu a, ọ gaghị ekwe ka m nweta
Zaghachi Griselle Rojas
Daalụ nke ukwuu maka onyinye Joaquín!
Enweela m ụfọdụ nsogbu n'oge usoro a, etinyela afọ mana ọ gaghị ekwe ka m mepee. N'ikpeazụ, m hapụrụ, n'ihi na mgbe ịmalitegharịrị na ikwugharị usoro ahụ, anaghị m apụ. Amaghị m etu esi eme, mana ugbu a, ejidela m ma emelitere ngwa ahụ ma enwere m ụlọ ahịa playa na-arụ ọrụ ọzọ.
Enwere m ike iji mbadamba m ọzọ! N'ihi na ebe ọ bụ na ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ na nwelite ikpeazụ a gbahapụrụ ya.
German Diaz dijo
Ndewo, emere m dị ka i kwuru mana ọ na-anọgide na akụrụngwa nke ịlele ozi m tinyere email ahụ m kpọgidere ha na ọzọ ọ na-ajụ m maka email na paswọọdụ yana ana m enweta ọkwa na a gaghị egbu ya ruo mgbe emelitere. .. biko nyere aka ... daalụ
Zaghachi Germán Díaz
Enwerem $ 50, gini ka m zuru, a Nook Tablet 7 ma obu oku si Amazon?
Oprah Winfrey na-ahọrọ Kindle Oasis, ị na-eme?